Intersex Awareness Day | अन्तरलिङ्गी जनचेतना दिवस | २०७८ कार्तिक ९ | Hamro Patro
अन्तरलिङ्गी जनचेतना दिवस ( Intersex Awareness Day )
प्रत्येक वर्ष अक्टोबर २६ का दिन अन्तरलिङ्गी जनचेतना दिवस मनाइन्छ । यस दिवसको मुख्य उद्देश्य अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरू बारे जनचेतना अविवृद्धि गर्नु हो ।
यो दिवस सन् १९९६ देखि स्थापना भएको हो । सन् १९९६ अक्टोबरमा अमेरिकन एकाडेमि अफ पिडियाट्रिक्सको वार्षिक सम्मेलनमा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई विभेद गरिएको भएर इन्टरसेक्स सोसाइटी अफ नर्थ अमेरिकाले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यहीबाट यस दिवसको सुरुवात भयो र हाल अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यो दिवस मनाइन्छ ।
अन्तरलिङ्गी (Intersex) व्यक्ति भन्नाले के हो ?
हरेक व्यक्तिको यौनाङ्ग प्रजनन प्रणालीका अङ्गहरूबाट छुट्टिने भिन्नताहरूलाई यौन विशेषता (अङ्ग्रेजीमा : Sex Characteristics) भनिन्छ । यसलाई छोटकरीमा 'Sex' मात्र भन्ने गरिएको छ । पुलिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी दुबै यौन विशेषताका बारेमा निश्चित मान्यता राखिएको र परिभाषित गरिएको छ । तथापि समाजमा पुलिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी यौन विशेषता बाहेकका यौन विशेषता र विविधता भएका मानिसहरू पनि छन् । पुलिङ्गी वा स्त्रीलिङ्गी शरीरका परम्परागत धारणाहरूमा नअटाउने यौन विशेषता (यौनाङ्ग, प्रजनन ग्रन्थि तथा गुणसुत्रको ढाँचा) भएका व्यक्तिहरूलाई अन्तरलिङ्गी व्यक्ति (अङ्ग्रेजीमा : Intersex person) भनिन्छ ।
अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको यौनाङ्ग वा शरीर कस्तो हुन्छ ?
पुलिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी शरीरको परम्परागत धारणा बाहेक पनि थुप्रै यौन विशेषताका विविधताहरू छन् । ती सबै विविधताहरूलाई 'अन्तरलिङ्गी विविधता' भनि चिनिन्छ । तसर्थ 'अन्तरलिङ्गी' एउटा छाता शब्द हो । अन्तरलिङ्गी यौन विशेषताका विविधता ४० भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । कतिपय अन्तरलिङ्गी विविधताहरू यौनाङ्गीय हुन्छन्, जस्तै :- दुबै यौनाङ्ग हुनु । कतिपय अन्तरलिङ्गी विविधताहरू गुणसुत्रीय हुन्छन्, जस्तै :- XXY, XYY, XO, इत्यादी गुणसुत्र (chromosome) हुनु । कतिपय अन्तरलिङ्गी विविधताहरूको उदाहरण व्यक्तिको बाह्य यौनाङ्ग शिश्न र आन्तरिक पाठेघर हुनु वा बाह्य यौनाङ्ग योनी र भित्री अण्डकोष (इन्टरनल टेस्टीस) हुनु पनि हो । तसर्थ सबै अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको शारीरिकी एकै नाशको हुन्छ भन्ने छैन ।
कोही व्यक्ति अन्तरलिङ्गी भनेर कसरी थहा पाइन्छ ?
कतिपय अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको यौन विशेषता जन्मँदै देखिन्छ । जस्तै :- दुबै यौनाङ्ग लिएर बच्चा जन्मँदा । कतिपय अन्तरलिङ्गी यौन विशेषताहरू किशोरावस्थामा मात्र दृश्यक हुन्छन् । कतिपय अन्तरलिङ्गी गुणसुत्रीय विविधताहरू शारीरिक रूपमा देखा नपर्न पनि सकिन्छ ।
अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरू 'यस्तै देखिन्छ' भन्ने हुँदैन । अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरू कथित 'फरक' देखिन्छ भन्ने पनि हुँदैन । अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरू जस्तो पनि देखिन सकिन्छ । कुनै व्यक्तिलाई देखेर ऊ अन्तरलिङ्गी हो भन्ने अनुमान अड्कल गर्न सक्ने हुँदैन ।
के अन्तरलिङ्गी हुनु विकार हो ? के अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई 'सामान्य' बनाउन सकिन्छ ?
हाम्रो सामाजिकिकरणले नै अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई वहिष्करणमा पारेको छ, त्यसैले यस्तो सामाजिकिकरणमा हुर्केका व्यक्तिहरूमा त्यस्तो पूर्वाग्रही सोच बस्न सक्छ । अन्तरलिङ्गी व्यक्ति हुनु कुनै विकार वा रोग होइन र मानव शरीरको एउटा विविधता हो । अन्तरलिङ्गी हुनु कुनै विकार भएको वैज्ञानिक प्रमाण छैन र आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले सामान्य ढङ्गले नै परिभाषित गरेको छ । हाम्रो सामाजिक मान्यता र मानसिकताका कारण अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई 'असमान्य'को संज्ञा भिराइएको हो । अन्तरलिङ्गी व्यक्ति हुनु मानिसको प्राकृतिक र जैविक विविधताको उपज हो ।
कतिपय अभिभावकहरू तथा चिकित्सकहरूले कथित 'सामान्य' बनाउने नाममा अन्तरलिङ्गी शिशुहरूलाई जन्मना साथ वा बाल्यकालमै शल्यक्रिया गरिदिन्छन् । जस्तै : कुनै बच्चाले दुबै यौनाङ्ग लिएर जन्मेको छ भने, बढी प्रभुत्वर्षी देखिने अङ्गलाई राखेर अर्को अङ्गलाई हटाउने शल्यक्रिया गराइन्छ वा अभिभावकलाई छोरा चाहिएको हो कि छोरी चाहिएको आधारमा शल्यक्रिया गरिन्छ । जन्मँदा बखतमा दृश्यक नभएको कतिपय अन्तरलिङ्गी विविधताका बच्चाहरूलाई बाल्यकालमा नै शल्यक्रिया गरी कथित 'सामान्य' बनाउने अभ्यासहरू छन् । जस्तै : जन्मँदा बखत बाहिरी यौनाङ्ग योनी दृश्यक थियो र पछी नीज बच्चाको अन्तरिक अण्डकोष रहेको पत्ता लागेमा, त्यसलाई हटाउने, लगायत । सर्वप्रथम त 'सामान्य' बनाउनु भनेकै हाम्रो समाजमा अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरू प्रति रहिआएको विभेदकारी मानसिकताको उपज हो । त्यसरी शिशुअवस्था वा बाल्यावस्थामा शल्यक्रिया गरिँदिदा नीज व्यक्ति आफ्नो शरीर बारे स्वयं सचेत भएर निर्णय लिने Informed choice बाट वञ्चित हुन्छ । यस्ता कतिपय शल्यक्रियाहरू सफल पनि हुँदैनन् र त्यस्ता बच्चाहरूलाई पछी सम्म हानि पुर्याइरहने अवस्था पनि हुन जान्छ । बाल्यकालमा अभिभावक वा चिकित्सकको इच्छा अनुसार एउटा लैङ्गिकता कायम गरिदिँदा नीज व्यक्ति स्वयं वयस्क भइसकेपछी त्यस भन्दा विपरीत लैङ्गिकताको स्वःअनुभूती वा शारीरिक विकास भएमा नीजलाई बाल्यकालमा गरिदिएको शल्यक्रियाले नोक्सानी पुर्याउने भयो । कुनै पनि शिशुलाई आफू अबोध अज्ञात रहेको अवस्थामा शल्यक्रिया गराइदिँदा उसको शरीर बारे पूर्ण जानकारी पाएर स्वतन्त्र छनोट गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ । त्यसैले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई बाल्यकाल वा शिशुअवस्थामा शल्यक्रिया गराई कथित 'सामान्य' बनाउने कार्यलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघले Intersex Genitial Mutilation (IGM) भनि हननजन्य कार्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । आफ्नो शरीर कस्तो हो भन्ने जानकारी साथ हुर्कनु र वयस्क भएपछी आफ्नो शरीर कस्तो बनाउने नबनाउने वा शल्यक्रिया गर्ने नगर्ने नीज व्यक्ति स्वयंको निर्णयको विषय हो ।
के अन्तरलिङ्गी हुनु उभयलिङ्गी (Hermaphrodite) हो ?
होइन । उभयलिङ्गी प्राणी भन्नाले एउटै शरीरमा पुलिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी प्रजनन प्रणाली भएर आफैद्वारा प्रजनन गर्न सक्ने प्राणी हुन् । उभयलिङ्गी जीवहरूमा पुलिङ्गी छुट्टै र स्त्रीलिङ्गी छुट्टै हुँदैन । मानव प्रजातिमा उभयलिङ्गी जीवको सम्भावना छैन । तसर्थ अन्तरलिङ्गी हुनु र उभयलिङ्गी हुनु फरक विषय हुन् ।
के अन्तरलिङ्गी हुनु पारलैङ्गिक (Transgender) हो ?
सर्वप्रथमतः लिङ्ग (Sex) र लैङ्गिकता (Gender) दुई फरक विषयहरू हुन् । मानिसको शारीरिकी (एनाटोमी) ले यौन विशेषता निर्धारण गर्छ । अन्तरलिङ्गी हुनु त्यही यौन विशेषता हो । तर लैङ्गिक पहिचान फरक विषय हो । लैङ्गिक पहिचान भन्नाले हरेक व्यक्तिको भित्री मन वा अन्तरात्माबाट लैङ्गिकता सम्बन्धी आएको व्यक्तिगत अनुभूति तथा अनुभव हो । यसलाई लैङ्गिक अन्तरबोधन (innate sense of gender) पनि भनिन्छ । कुनै पनि शिशुलाई जन्मने बित्तिकै आफ्नो लैङ्गिकताको बारे चेतना हुँदैन । हाम्रो समाजमा कुनै बच्चा जन्मँदा बखत नीजको यौनाङ्ग शिश्न छ भने केटा र योनी छ भने केटी भन्ने अनुमान गरिन्छ र सोही लैङ्गिकता अनुरूप हुर्काइन्छ । जन्मँदा बखत गरिएको यो अनुमान कतिपय व्यक्तिहरूका लागि सही हुन सक्छ भने कतिपय व्यक्तिहरूका लागि गलत । लैङ्गिक पहिचान व्यक्ति हुर्कँदै जाने क्रममा निजले गर्ने आफ्नो लैङ्गिकता प्रतिको अनुभूतीबाट थाहा हुँदै जाने विषय हो । जस्तै :- कुनै बच्चालाई यौनाङ्गका आधारमा केटा भन्ने अनुमान गरी हुर्काइएको छ, तर उसको स्वःअनुभूतीको लैङ्गिकता केटीको हुन सक्छ र उसले आफूलाई महिला भनेर पहिचान गर्न सक्छ वा कुनै बच्चालाई यौनाङ्गका आधारमा केटी भन्ने अनुमान गरी हुर्काइएको छ, तर उसको स्वःअनुभूतीको लैङ्गिकता केटाको हुन सक्छ र उसले आफूलाई पुरुष भनेर पहिचान गर्न सक्छ । यी व्यक्तिहरूलाई पारलैङ्गिक व्यक्ति भनिन्छ । तसर्थ शारीरिकीले यौन विशेषता र स्वःअनुभूतीको लैङ्गिकताले लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्दछ । अन्तरलिङ्गी र पारलैङ्गिक दुई फरक विषय हुन् ।
के अन्तरलिङ्गी हुनु तेस्रोलैङ्गिक (Third gender) हो ? वा महिला, पुरुष भनेजस्तै अन्तरलिङ्गी भनेर छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने हो ?
नेपाली भाषामा सेक्स र जेण्डरलाई फरक छुट्याउने गरी शब्द थिएन, 'लिङ्ग' नै भनिन्थ्यो । केही दशक यता सेक्सलाई 'जैविक लिङ्ग' र जेण्डरलाई 'सामाजिक लिङ्ग' भन्ने अभ्यास पनि भएको पाइन्थ्यो । हाल हामी सेक्सलाई 'लिङ्ग' र जेण्डरलाई 'लैङ्गिकता' भन्छौँ । खासमा Third gender भएपछी 'तेस्रोलैङ्गिक' भनिनुपर्ने हो, तर पहिले देखि 'तेस्रोलिङ्गी' भनेर प्रचलनमा ल्याइएको छ । शाब्दिक अर्थ बुझ्दा महिला र पुरुष भन्दा फरक लैङ्गिकतालाई तेस्रोलैङ्गिक भनिने गरिन्छ । यो शब्दावलीले सन् २००७ देखि मान्यता पाउन थालेको भएतापनि केही वर्ष यता विवादस्पद पनि भएको छ । तेस्रो भए पहिलो र दोस्रो को ? शब्दमा नै विभेद छ भन्ने कुरा उठेको देखिन्छ । महिला र पुरुष बाहेकको लैङ्गिक पहिचानलाई जनाउन गैर-द्वयसांखिक (Non-binary) भन्ने शब्द पनि प्रचलनमा आएको छ । तेस्रोलैङ्गिक शब्दको विमर्श आफ्नै ठाउँमा छ, तर तेस्रोलैङ्गिक हुनु लैङ्गिक पहिचानको विषय हो भने अन्तरलिङ्गी हुनु यौन विशेषताको विषय ।
अन्तरलिङ्गी यौन विशेषता भएका मानिसहरूको लैङ्गिक पहिचान महिला, पुरुष वा महिला पुरुष बाहेक गैर-द्वयसांखिक हुन्छ । तसर्थ अन्तरलिङ्गी यौन विशेषता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो लैङ्गिकता कसरी चिनाउन चाहन्छन् ? महिला भनि चिनाउन चाहन्छन् भने महिला, पुरुष भनि चिनाउन चाहन्छन् भने पुरुष, महिला वा पुरुष बाहेक भनि चिनाउन चाहेका छन् भने गैर-द्वयसांखिक भनि उल्लेख गर्छन् ।
अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरू को तर्फ आकर्षित हुन्छन् ?
अरु व्यक्तिहरू जस्तै अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको यौन अभिमुखिकरण / यौन झुकाव (Sexual Orientation) हुन्छ । कुनै अन्तरलिङ्गी यौन विशेषता भएका व्यक्ति जसको लैङ्गिक पहिचान पुरुष र आकर्षण पनि पुरुष तर्फ भएमा वा जसको लैङ्गिक पहिचान महिला र आकर्षण पनि महिला तर्फ भएमा समयौनिक (Homosexual) व्यक्ति, कुनै अन्तरलिङ्गी यौन विशेषता भएका व्यक्ति जसको लैङ्गिक पहिचान पुरुष र आकर्षण महिला तर्फ भएमा वा जसको लैङ्गिक पहिचान महिला र आकर्षण पुरुष तर्फ भएमा विषमयौनिक (Heterosexual) व्यक्ति । त्यसै गरी अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूको यौन अभिमुखिकरण द्वियौनिक (Bisexual), सर्वयौनिक (Pansexual), अयौनिक (Asexual) लगायत हुन सक्छ ।